Fotoana momba ny namana - The Word Foundation
The Magazine Word
"Fotoam-bavaka miaraka amin'ny namana" dia singa Q & A The Teny gazety. Teo anelanelan'ny 1906 sy 1916, ireo fanontaniana voatanisa etsy ambany dia naparaky ny mpamaky The Teny ary novalian'i Mr. Percival teo ambanin'ny anarana hoe "FAHAFAHANA." Rehefa nandeha ny fotoana dia nanapa-kevitra ny hametraka ny anarany ho mpanoratra ny valiny isika. Mba hitahiry ny maha-ara-tantara azy, misy hadisoana mahazatra amin'ny haino aman-jery amin'ny endriny sasany dia tazonina hatrany miaraka amin'ny fampiasana fiatra malaza mandritra io fotoana io.
Ao amin'ny 1986, ny Word Foundation dia namorona dikan-teny iray isan-telovoaran'ny gazetiboky The Word izay mbola ao amin'ny famoahana azy. Misy ihany koa ny fizarana "Moments with Friends" izay ahitana fanontaniana napetrak'ireo mpamaky antsika.
Kitiho ny daty isam-bolana eto ambany hahazoana ny valiny amin'ireo fanontaniana rehetra voasoratra ao anatin'io daty io.
Kitiho ny fanontaniana hametrahana ny valin'izany fanontaniana izany.
tsindrio eo amin'ny PDF ho fanitsiana ny endrika niandohana voalohany.
• Ahoana no ahafahantsika milaza ny momba antsika tamin'ny fotoana naha-nofo farany antsika?
• Azontsika atao ve ny milaza hoe impiry isika no teraka?
• Mahatsiaro tena eo anelanelan'ny fahaterahana indray isika?
• Inona no hevitra teôsôjika momba ny fananganana an'i Adama sy Eva?
• Manao ahoana ny halavan'ny fotoana voatondro eo anelanelan'ny reincarnations, raha misy fotoana voafaritra?
• Manova ny toetrantsika ve rehefa miverina eto an-tany isika?
• Misy mpahay teolojia mino ny finoanoam-poana ve?
• Inona no fototr'izany ho an'ny finoanoam-poana fa ny iray teraka miaraka amin'ny "caul" dia mety manana manam-pahaizana ara-tsaina na hery avy amin'ny hery asan'ny maizina?
• Raha misy hevitra iray azo ampitaina ao an-tsain'ny hafa, nahoana no tsy natao araka ny tokony ho izy sy amin'ny fahaizana amam-pahalalana toy ny fitondràna tsotra?
• Moa ve isika rehetra izay mifanandrify amin'ny dingan'ny fandinihana hevitra?
• Ahoana no ahafahantsika miresaka amin-kafanam-po?
• Mety ve ny mamaky ny eritreritry ny hafa raha tiantsika izy ireo sa tsia?
Enga anie 1906
• Nahoana no tsara kokoa ny fanasitranana ny vatana taorian'ny nahafatesany fa tsy nandevina azy?
• Misy fahamarinana ve ao amin'ireo tantara izay vakintsika na andrenesantsika momba ny vampire sy ny vampirema?
• Inona no antony mahatonga ny fahafatesan'ny olona tampoka eo amin'ny tanora na eo amin'ny fiainany voalohany, rehefa hita fa taona maro mahasoa sy fitomboana, saina sy ara-batana no eo anoloan'izy ireo?
• Raha toa ka tsy voakilasy ny sandrin'ny astral, ny tongotra, na ny mpikambana hafa ao amin'ny vatana rehefa atsofoka ny mpikambana ao amin'ny vatany dia maninona ny vatana astral no tsy afaka mamolavola tasy na tongotra hafa?
• Moa ny teôlôpista ve ny mpihinam-bary na mpihinana hena?
• Ahoana no ahafahan'ny tena teosophista mihevi-tena ho mpahay teôlôpista ary mbola mihinana hena rehefa fantatsika fa ny fanirian'ny biby dia nafindra avy amin'ny nofon'ny biby ho an'ny vatan'ny olona mihinana azy?
• Tsy marina ve fa miaina legioma ny yogis ao India, ary ireo olon'ny zava-bitany, ary raha izany, tsy tokony ho an'ireo izay te hivoatra amin'ny hena sy miaina legioma koa ve izany?
• Inona no fiantraikan'ny fihinanana legioma amin'ny vatana, raha oharina amin'ny fihinanana hena?
• Ahoana no ahafahan'ny vegetarisme misoroka ny fisainan'ny saina rehefa voatsindry ny vegetarisme mba hahazoana ny fifantohana?
• Inona no dikan'ny dikan'ny term elementals, ampiasaina amin'ny fifandraisana maro avy amin'ny teôsophista sy mpitsangatsangana?
• Inona no tiana holazaina amin'ny hoe "zon'olombelona"? Misy fahasamihafana eo aminy ve?
• Misy rafitra mifehy ny faniriana, ny hafa mifehy ny herin'ny hery, ny hafa mifehy ny asan'ny vatanao, sa ny fanaraha-maso ny olombelona rehetra?
• Moa ve io fifehezana io ihany no mifehy ny asa aman-draharaha sy ny asa tsy mahatsiaro ny vatana?
• Manan-danja ny singa fototra amin'ny ankapobeny, ary moa ve izy rehetra na iray amin'ireo eo amin'ny fizotry ny evolisiona dia lasa lehilahy?
• Azo atao ve ny mahita ny ho avy?
• Moa ve tsy azo atao ny mahita ny fisehoan-javatra marina momba ny lasa sy ny zava-niseho satria mbola ho avy amin'ny ho avy izy ireo amin'ny fomba mazava sy mazava tsara rehefa mahita ny ankehitriny izy?
• Ahoana no ahafahan'ny olona mahita faingam-pandeha rehefa manohitra ny zavatra iainantsika rehetra ny fahitana an'izany?
• Inona avy ireo taova ampiasaina amin'ny fanairana, ary ahoana no nahatonga ny fahitana iray nafindra avy tamin'ireo zava-boaary teo an-tanany tamin'ireo lavitra sy lavitra, ary avy amin'ny fantatra hita amin'ny tsy hita maso?
• Afaka mijery ny ho avy ve ny Occultista isaky ny manao izany izy, ary mampiasa fakan-tsary manaitra hanao izany?
• Raha misy olon-kendry afaka manindrona ny voaly dia maninona no tsy misy olon-kafa, na mandray soa avy amin'ny fahalalany ny fisehoan-javatra hitranga?
• Inona no atao hoe "maso fahatelo" ary ampiasain'ny mpanao asan'ny mpanao tononkalo izany?
• Iza no mampiasa ny fihinanan-jiro, ary inona no tanjon'ny fampiasana azy?
• Ahoana no misokatra ny masony fahatelo na ny pineal, ary inona no mitranga amin'ny fisokafana toy izany?
• Manana heviny manokana amin'ny teôsôfa ve ny Krismasy, ary raha izany, inona?
• Mety ho olona marina ve i Jesosy, ary teraka tamin'ny Andro Krismasy?
• Raha i Jesosy dia lehilahy tena izy, nahoana no tsy misy tantara ara-tantara an-tsoratra momba ny fahaterahana na ny fiainan'olombelona toy izany?
• Nahoana no antsoin'izy ireo hoe, 25th of December, Krismasy fa tsy Jesusmass na Jesusday, na anarana hafa?
• Misy fomba esoterika ve hahatakatra ny nahaterahan'i Jesosy sy ny fiainany?
• Niresaka momba an'i Kristy ho fitsipika ianao. Manavaka ve i Jesosy sy i Kristy?
• Inona no antony manokana tokony hankalazan'ny andro 25 ny volana Desambra ny nahaterahan'i Jesosy?
• Raha mety ho olombelona ny ho tonga Kristy, ahoana no nahatanterahan'izany ary ahoana no ifandraisany amin'ny andro 25T of Desambra?
• Ratsy ve ny mampiasa saina fa tsy fitaovana ara-batana hanasitranana aretina ara-batana?
• Mety ve ny manandrana manasitrana aretina ara-batana amin'ny fitsaboana ara-tsaina?
• Raha mety ny manasitrana ny aretina ara-tsaina amin'ny fisainana ara-tsaina, manome ny aretina ara-batana dia manana fiantraikany ara-tsaina, nahoana no diso amin'ny mpahay siansa ara-tsaina na kristiana ny manasitrana ireo aretina ireo amin'ny fitsaboana ara-tsaina?
• Nahoana no diso ny mpahay siansa manam-pahaizana handray vola amin'ny fitsaboana aretina ara-batana na ara-tsaina raha toa kosa ny dokotera mitaky ny saram-pitsaboana tsy tapaka?
• Nahoana no tsy mety amin'ny mpahay siansa ara-tsaina ny mahazo vola amin'ny fitsaboana aretina rehefa manokana ny fotoanany rehetra izy ary tsy maintsy manana vola hiainana?
• Ahoana no ahafahan'ny natiora manome olona iray tena maniry ny handray soa ho an'ny hafa, nefa iza no tsy manana fomba hanohanana ny tenany?
• Moa ve ny mpahay siansa kristianina sy sainy tsy manao tsara raha toa ka manasitrana ny tsy fahombiazan'ny dokotera izy ireo?
• Inona avy ireo fitakiana ananantsika mikasika ny fepetra ara-tsaina tokony hananan'ny manam-pahaizana ara-tsaina?
• Amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ilay olona manaraka ny fisainan'ny mpahay siansa ara-tsaina sy kristiana ary manaraka tsara ny zavatra ataony?
• Inona avy ny vokatry ny fanekena sy ny fampiharana ny fampianaran'ireo mpahay siansa kristiana na saina?
• Fa maninona no manjary mpanasitrana marary maro toy izany raha tsy manasitrana ny fanasitranana izy ireo, ary raha tsy izy ireo no misolo tena ny tenany, tsy hahita ny zava-misy ve ny marary?
• Tsy i Jesosy sy ny maro amin'ireo olo-masina no nanasitrana ny aretina ara-batana tamin'ny fomba ara-tsaina ary raha diso ve izany?
• Raha diso ny mahazo vola amin'ny fanasitranana aretina ara-batana amin'ny alàlan'ny sainy ara-tsaina, na amin'ny fanomezana ny "fampianarana ara-tsiansa", tsy diso koa ve ny mpampianatra amin'ny sekoly iray handray vola amin'ny fampianarana ny mpianatra ao amin'ireo sampan'ny fianarana?
• (Ao amin'ny taratasy ho an'ny mpanonta, ny andiam-balala 1907 "Moments with Friends" dia voavaly, arahin'ny valintenin'i Mr. Percival.-Ed.)
• Milaza ny Kristiana fa manana vatana, fanahy ary fanahy ny olona. Milaza ny Theosophist fa manana fitsipika fito ny olona. Amin'ny teny vitsivitsy dia inona ireo fitsipika fito ireo?
• Amin'ny fiteny vitsivitsy dia azonao lazaina amiko ve izay mitranga amin'ny fahafatesana?
• Ny ankamaroan'ny spiritista dia milaza fa amin'ny fisintahany dia miseho ny fanahin'ireo maty ary miresaka amin'ny namana. Milaza ny Theosophists fa tsy izany no izy; fa ny zavatra hita maso dia tsy ny fanahy fa ny akorany kosa, manidina na maniry ny vatana izay efa nolavin'ny fanahy. Iza marina izany?
• Raha mety ho gadra noho ny faniriany ny fanahin'ny olona, ​​nahoana no mety tsy hiseho izany fanahy izany ary nahoana no diso ny milaza fa tsy miseho sy miresaka amin'ny mpiara-miasa izy ireo?
• Raha ny fisehoana eo amin'ny sezansa dia ny kibay, ny spooks na ny faniriana vatana izay nofaritan'ny fanahin'olombelona aorian'ny fahafatesana, nahoana izy ireo no afaka mifampiresaka amin'ireo mpaka sary amin'ny foto-kevitra fantatry ny olona voakasika, ary nahoana? Moa ve io lohahevitra io ihany no haverina hatrany?
• Tsy azo lavina fa ny fanahy dia milaza ny marina indraindray ary manome toro-hevitra ihany koa izay mety hitondra soa ho an'ny rehetra. Ahoana no ahafahan'ilay teôsôpôtista, na ny hafa manohitra ny spiritisma, mandà na manazava ireo zava-misy ireo?
• Raha marina fa tsy misy afa-tsy shells, spooks sy entities izay tsy misy manasaka, araka ny fampianaran'ny teôsophika, amin'ny fisamborana, avy aiza avy ny fampahalalana sy ny fampianarana momba ny filôzôfika ary matetika ny teôsophical natiora, izay noeritreretin'ny medy ny sasany?
• Moa ve ny maty no miara-miasa na miara-miombon'antoka amin'ny faran'ny farany?
• Ahoana no fomba hihinanana ny maty, raha tsy izany? Inona no manohana ny fiainany?
• Manao akanjo ve ny maty?
• Mipetraka ao amin'ny trano ve ny maty?
• Matory ve ny maty?
Enga anie 1908
• Mipetraka ao amin'ny fianakaviana ve ny maty, eo amin'ny fiarahamonina, ary raha misy ny governemanta?
• Misy sazy na valisoa ho an'ny asa nataon'ireo maty, na mandritra ny fiainana na aorian'ny fahafatesana?
• Mahazo fahalalana ve ny maty?
• Fantatry ny maty ve ny zava-mitranga eto amin'ity izao tontolo izao ity?
• Ahoana no hanazavanao ireo toe-javatra nahitana ny maty na tamin'ny nofinofy, na tamin'ny olona nifoha, ary nanambara fa ny fahafatesan'ny olona sasantsasany, ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana, dia efa akaiky?
• Moa ve ny maty dia nanintona ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviany ety an-tany, ary mijery azy ireo; Milaza ny renim-pianakaviana iray ve ny zanany kely?
• Ao amin'ny tontolon'ny maty no misy ny masoandro sy ny volana ary ny kintana toy ny eto amin'izao tontolo izao?
• Azo atao ve ny mamelona ny maty amin'ny tsy fahalalana ny velona, ​​amin'ny fanolorana hevitra na asa?
• Fantatry ny olona ve hoe aiza no misy ny foiben-toeran'ny masoandro sy ny planeta misy azy? Efa namaky aho fa angamba i Alcyone na Sirius.
• Inona no mahatonga ny fo amam-batana; Moa ve ny fifindran'ny onja avy amin'ny masoandro, ary koa ny momba ny fofona?
• Inona no ifandraisan'ny fo sy ny firaisana ara-nofo-ary koa ny fofona?
• Ohatrinona ny volana amin'ny olombelona sy ny fiainana hafa eto an-tany?
• Ny masoandro na ny volana ve no mifehy na mitantana ny vanim-potoana? Raha tsy izany, inona no atao?
• Azonao lazaina ahy ve ny momba ny toetry ny afo na ny lelafo? Toa zava-mahagaga foana izany. Tsy mahazo fampahalalana mahafa-po avy amin'ireo boky siantifika aho.
• Inona no antony mahatonga ny firoboroboana lehibe, toy ny afo mirehitra afo sy afo izay toa miara-misokatra avy amin'ny faritra samihafa ao an-tanàna, ary inona no mety hitranga?
• Ahoana no mahatonga ny metaly toy ny volamena, varahina ary volafotsy?
• Mino ny astrolojia ve ianao? Raha eny, ohatrinona ny heverina ho mifandray amin'ny fiainan'ny olona sy ny tombontsoany?
• Nahoana no misy fiantraikany amin'ny hoavin'ny ego noho io fahaterahana io ny fotoana hahaterahana ao amin'ny tontolon'ny zavaboary?
• Ahoana no mamaritra ny hoavin'ny olona iray amin'izao fotoana izao?
• Ahoana ny fiantraikany eo amin'ny fahaterahana, na ny anjaran'olona, ​​miaraka amin'ny karma amin'ny ety?
• Moa ve ny fiantraikan'ny planeta ampiasaina amin'ny fitantanana ny karma olombelona, ​​na ny ho aviny? Raha izany, aiza no hisy ny fahafahana?
• Nahoana no indraindray no nilaza fa i Jesosy dia iray amin'ireo mpamonjy ny olombelona ary ireo olon'ny antitra ihany koa dia nanana ny mpamonjy azy ireo, fa tsy nilaza hoe Izy no Mpamonjy izao tontolo izao, araka izay tazonin'ny Kristianisma Anarana?
• Azonao ambara aminay ve raha misy olona mankalaza ny nahaterahan'ny mpamonjy azy ireo na ny manodidina ny roapolo amby roapolo amin'ny volana Desambra (amin'ny fotoana ilazana ny masoandro hiditra amin'ny famantarana Capricorn?
• Voalaza fa ny fahaterahan'i Kristy dia ny fahaterahana ara-panahy. Raha izany no izy, nahoana no lazaina fa nankalaza ny vatan'ny fety noho ny fisakafoanana sy ny fisotroana ny Krismasy, amin'ny lafiny ara-nofo, izay mifanohitra amin'ny fomba fisainantsika ara-panahy?
• Ao amin'ny "Moments with Friends," ao amin'ny Vol. 4, pejy 189, lazaina hoe Krismasy dia midika hoe "Ny fahaterahana ny masoandro masoandro tsy hita maso, ny Fitsipika Kristiana," izay, raha mbola mitohy, "Tokony ho teraka ao anatin'ny olombelona". Raha izany no izy dia manara-maso ny ara-batana Ny nahaterahan'i Jesosy dia tamin'ny faha-roapolo tamin'ny desambra ihany koa?
• Raha tsy niaina sy nampianatra araka ny tokony ho izy i Jesoa na i Kristy, ahoana no nahatonga izany hadisoana izany nandritry ny taonjato maro ary tokony handresy ankehitriny?
• Midika ve ianao fa ny tantaran'ny Kristianisma dia tsy inona fa fable, fa angano ny fiainan'i Kristy, ary saika nandritra ny 2,000 taona izao tontolo izao no nino angano?
• Raha mahavita mahita ny zava-manahirana ny astra, inona no antony tsy ahafahan'ny fanahy mifehy ny fampahalalam-baovao mahafeno ny tanjaky ny tarika malaza?
• Inona no fanazavana azon'ireo soso-kevitra momba ny horohoron-tany ho an'ireo horohoron-tany mahatsiravina izay matetika mitranga, ary mety handrava olona an'arivony?
• Inona no atao hoe fahamasinana na fampodiana amin'ny maha-Zokiny farany indrindra?
• Inona ny fampiasana na ny asan'ny vatan'ny pitipoa?
• Inona ny fampiasana na ny asan'ny pineal?
• Inona no fampiasana na fihenan'ny kalsa?
• Inona no fampiasana na fiasan'ny tosidra kely?
• Manan-tsaina ve ny biby ary mieritreritra ve izy ireo?
• Hisy vokany ratsy ve ho an'ny olombelona amin'ny fisian'ny biby an-trano?
• Misy antony ve ny filazana ireo izay milaza fa ny fanahin'ireo lehilahy maty vady na biby?
• Azonao atao ve ny manazava bebe kokoa ny fomba fihevitry ny olona samy hafa momba ny tontolo ara-batana mba hamokarana karazana biby isan-karazany toa ny liona, orsa, ny vorombola, ny roatra? (Ity fanonta ity dia momba ny tonian-dahatsoratr'i Percival /Thought/. Ed.)
• Afaka mijery ao anatin'ny vatany ny olona iray ary mahita ny asan'ny taova isan-karazany, ary raha izany dia ahoana no hitrangan'izany?
• Inona avy ireo hevi-dehibe tsy mitovy amin'ny tontolo ara-panahy? Ireo teny ireo dia matetika ampiasaina amin'ny boky sy ny gazetiboky mifandraika amin'ireo lohahevitra ireo, ary io fampiasana io dia mety hampitony ny sain'ny mpamaky.
• Moa ve ny taova tsirairay ao amin'ny vatana dia vondron'olona manan-tsaina na miasa toy izao ny asany?
• Raha aseho ao an-tsaina ny taova tsirairay na ny ampahany amin'ny vatana dia inona no mahatonga ny olona iray tsy dia hahavery ny fampiasana ny vatany rehefa very ny fampiasany ny sainy?
• Toa tsy azo heverina loatra fa ny hevitra roa mifanohitra no mety ho marina momba ny fahamarinana. Nahoana no misy hevitra maro momba ny olana na zavatra sasany? Ahoana ary no hahaizantsika mamantatra hoe inona marina ny hevitra ary inona no marina?
• Nahoana ny vato sarobidy no voatendry mandritra ny volana maromaro amin'ny taona? Moa ve izany dia vokatry ny zavatra hafa noho ny fanirian'ny olona?
• Misy diamondra na vato sarobidy hafa misy lanja hafa ankoatra izay maneho ny fari-bolan'ny vola? Ary, raha ny marina, miankina amin'ny inona ny lanjan'ny diamondra na vato hafa toy izany?
• Miasa amin'ny olona ve ny fanahy ary inona no zavatra ara-panahy?
• Moa ve tsy inoan'ny finoana fa afaka manidina ny Atlanteans? Raha eny, aiza no misy ny finoana toy izany?
• Moa ve ireo olona izay miezaka ny mamaha ny olana momba ny fiaramanidina avaratra, reincarnated Atlanteans?
• Raha namaha ny olana momba ny fiaramanidina ny Atlanteans, ary raha ireo atleta mitovy amin'ny aty Atlanteans amin'izao fotoana izao dia inona no antony mahatonga ireo olona ireo tsy haverina amin'ny laoniny hatramin'ny nanapotehan'i Atlantis sy talohan'izao fotoana izao, ary raha toa ka efa niverina tany aloha izy ireo amin'izao vanim-potoana misy ankehitriny izao, maninona izy ireo no tsy nahavita nampiakatra ny rivotra na efa nanidina hatramin'izao?
• Moa ve isika sa tsy miray amin'ny atma-buddhi?
• Moa ve tsy marina fa ny zava-drehetra azontsika dia efa ao amintsika ary ny zavatra rehetra tokony hataontsika dia ny mahatsapa izany?
• Moa ve ny haizina dia ny tsy fisian'ny hazavana, sa zavatra iray misaraka amin'ny tenany ary inona no mitana ny toetran'ny fahazavana? Raha miavaka sy misaraka izy ireo, inona ny haizina ary inona no hazavana?
• Inona no atao hoe radium ary ahoana no ahafahana manipy hery tsy mitsaha-mitombo tsy misy fiantraikany sy fahaverezan'ny herin'ny tenany sy ny vatany, ary inona no loharanon-kery lehibe amin'ny radio?
Enga anie 1910
• Azo atao ve ny mamolavola karazana voankazo, voankazo na zavamaniry vaovao, izay samy hafa sy tsy mitovy amin'ireo karazana fantatra hafa? Raha eny, ahoana no anaovana azy?
• Azonao atao ve ny mijery ny hoavy ary maminavina ny hetsika hoavy?
• Azo atao ve ny mametraka hevitra avy ao an-tsaina? Raha izany, ahoana no anaovana izany; Ahoana no ahafahan'ny olona iray miverina miverina indray ary mitazona izany ao an-tsainao?
• Misy fiantraikany amin'ny fiatoana na fampiroboroboana ny saina ao amin'ny fivoarany ve ny fananan'ny Fikambanana Tsiambaratelo? Azo atao ve ny mahazo zavatra tsy amin'antony?
• Nahoana ny olona no miezaka mitady zavatra tsy misy dikany? Ahoana no ahafahan'ny olona mitady zavatra amin'ny tsy misy, tsy maintsy mandoa izay azony?
• Inona ireo fahasamihafana manan-danja eo amin'ny Theosophy and New Thought?
• Inona no antony mahatonga ny homamiadana? Misy fanasitranana mahazatra ho azy ve sa misy fomba fitsaboana tsy maintsy hitranga alohan'ny hanasitranana azy?
• Nahoana ny bibilava iray no heverina fa tsy mitovy amin'ny olona hafa? Indraindray ny bibilava iray dia lazaina ho solontenan'ny faharatsiana, amin'ny fotoana hafa ho mariky ny fahendrena. Nahoana ny olona no manana tahotra voajanahary toy izany?
• Misy fahamarinana ve ao amin'ireo tantara izay nandoroan'ireo Rosiana mpanamboatra ny jiro? Raha izany, ahoana no nataon'izy ireo, inona no tanjon'izy ireo, ary azony natao sy ampiasaina ankehitriny?
Enga anie 1912
• Nahoana ny voromahery no nampiasaina ho tandindon'ny firenena samihafa?
• Moa ve ny voromahery mitongilana ankehitriny izay ampiasaina ho dika nasionalin'ny firenena sasany, izay hita ao amin'ireo tsangambaton'ny Hétites fahiny tamin'ny andron'ny Baiboly, dia manaiky ny toe-piainana andrinjinan'ny olombelona?
• Amin'ny efatra ka hatramin'ny antsasaky ny boribory eo amin'ny vato mason'ny Royal Arch Chapter dia ireo taratasy HTWSSTKS Manana fifandraisana amin'ny Zodiac izy ireo, ary inona no asehon'ireo toerana manodidina ny faribolana?
• Inona no mahasalama amin'ny sakafo?
• Manandrana hanina ny vidiny ve ny sakafo raha sakafo ivelan'ny sakafo?
• Ahoana no hiarovan-tena amin'ny lainga na fanendrikendrehan'ny hafa?
• Ahoana no fomba iainan'ny biby fiompy tsy misy sakafo ary toa tsy misy rivotra mandritra ny fotoana lava fiakaran'ny ala?
• Afaka miaina tsy misy aina ve ny biby amin'ny havokavoka? Raha eny, ahoana no iainantsika?
• Moa ve ny siansa no manaiky lalàna iray izay ahafahan'ny olombelona miaina tsy misy sakafo sy rivotra; raha izany no izy, efa velona ny olona, ​​ary inona ny lalàna?
• Nahoana no mitovy ny fotoana?
• Manana ny fifandraisana amin'ny fizika ara-batana na hafa amin'ny vatan'ny olombelona ve ny fotoana ao anatin'ny fisaratsarahana mankany amin'ny taona, volana, herinandro, andro, ora, minitra ary segondra? Raha eny, inona ireo fifanintsanana?
• Afaka miaina ve ny lehilahy iray, mamita ny andraikiny, ary maty ho an'ny fiainany mihoatra ny iray mandritra ny fotoana voafetra ny taona eto amin'ity tany ity?
• Azo atao amin'ny alalan'ny tanana ny zavatra fototra, amin'ny alàlan'ny fomba mahagaga; Raha eny, inona no mety ho endriky ny endrika ary ahoana no anaovana azy?
• Ahoana no tokony hampiasan'ny tanana amin'ny fanasitranana ny vatan'ny vatany manokana na ny ampahany amin'ny vatana?
• Inona no ilaina amin'ny fitomboan'ny fanoloran-tena?
• Inona no endriky ny emboka manitra, ary hafiriana no nampiasaina?
• Misy tombony azo avy amin'ny fandoroana emboka manitra ve, mandritra ny fisaintsainana?
• Moa ve ny voka-dratsin'ny fandoroana ditin-kazo mahatsiravina hita eny amin'ny fiaramanidina?
Enga anie 1913
• Inona no loko, metaly ary vato atolotra ireo planeta fito?
• Tokony hampifanaraka ny endriky ny planeta izay nahaterahan'ny mpampiasa ny loko, metaly ary vato.
• Moa ve manana loko manokana, metaly sy vato ny hatsaran-toetra miavaka, ary ahoana no ahafahan'izy ireo tsy hijery ny planeta?
• Inona avy ny litera na tarehimarika mifandray amin'ny planeta?
• Ny olombelona dia mikrokosmin'ny macrocosm, an'izao tontolo izao amin'ny miniature? Raha izany, ny planeta sy ny kintana hita maso dia tokony ho hita ao aminy. Aiza izy ireo?
• Inona no atao hoe fahasalamana amin'ny ankapobeny? Raha toa ny fahasamihafan'ny hery ara-batana sy ara-tsaina ary ara-panahy ataon'ny olombelona, ​​ahoana no aharetan'ny fifandanjana?
• Moa ve ny tsara indrindra ho an'ny lehilahy handao ny vatana nofo aman-dra tsy fantatra, mba hahafahan'ny fanahy miditra ao amin'ny nofinofiny?
• Hatraiza no avoakan'ny fanahy izay mamela ny vatany amin'ny saina sy mijanona ao aorian'ny fahafatesana?
• Azafady azafady ny famaritana ny tsy fahafatesana sy ny fanjakana amin'ny fomba fohy hoe ahoana no ahafahana tsy mety maty?
• Moa ve ny olona tiany sy tsy tiany ny fisaintsainan'ny tenany? Raha eny, ahoana no ahafantaran'izy ireo azy? Raha tsy izany, avy amin'iza ireo tia sy tsy tiany ireo?
• Tsara ve raha manaisotra ny faniriany hanao firaisana ny lehilahy, ary tokony hiezaka hiaina fiainam-pianakaviana izy?
• Inona no lanjan'ny fotopampianarana momba ny sorompanavotana, ary ahoana no ahafahana mampihavana azy amin'ny lalàn'ny karma?
• Inona no atao hoe fihomehezana, ary nahoana no mihomehy ny olona?
• Inona no fifandraisana misy eo amin'ny magnetism sy ny gravité, ary inona no tsy mampiavaka azy, raha tsy izany? Ary inona ny fifandraisana misy eo amin'ny magnetism sy ny magnetism biby, ary ahoana ny fahasamihafan'izy ireo, raha tsy izany?
• Ahoana ny fanasitranana ataon'izy ireo amin'ny fanetsiketsehana biby?
Enga anie 1915
• Moa ve ny magnetism-biby, ny mesmerism, ary ny hypnotisma mifandray, ary raha izany, ahoana no ifandraisan'izy ireo?
• Ahoana no ahafahan'ny magnetism biby atao mavitrika ary inona no azo ampiasaina?
• Inona no dikan'ny fofona; manao ahoana izy io? Moa ve ny singa ara-batana dia manomboka amin'ny famokarana ny fahatsapana, ary inona ny ampahany mahatonga ny fofona amin'ny fiainana?
• Inona ny fisainana? Ahoana no ahafahana mamboly sy ampiasaina?
• Inona ny aretina ary inona no fifandraisana misy bakteria amin'izany?
• Inona no homamiadana ary mety ho sitrana izy, ary raha sitrana izy, inona no fanasitranana?
• Inona no fomba tsara ahafahana mampifandray ireo toe-javatra mitranga sy manonofy mba tsy hisian'ny fifanajana mandritra ny fotoana tsy mahatsiaro ny fandriampahalemana?
• Inona no mandrisika antsika hanolo-tena ho amin'ny hevitsika? Aiza no ahafahantsika manohitra ny hevitsika amin'ny hafa?
• Inona no olana atrehan'ny olana sy ny tsy fahampian'ny vahaolana mandritra ny fotoam-pamokarana mandritra ny fotoam-pitsapana?
• Inona no atao hoe fahatsiarovana?
• Inona no miteraka fahatsiarovan-tena?
• Inona no mahatonga ny olona hadinony ny anarany na ny toerana misy azy, na dia tsy voakitika amin'ny lafiny hafa aza ny fahatsiarovany azy?
• Inona no dikan'ny hoe "fanahy" ary ahoana no tokony hampiasana ny teny hoe fanahy?
• Moa ve ny fotopampianarana momba ny fijaliantsika eto an-tany ho toy ny famonoana karmika, amin'ny lafiny iray amin'ny fanambarana teolojika momba ny fijaliantsika ho famotsoran-keloka any amin'ny helo, fa ny fanambarana roa dia tsy maintsy ekena amin'ny finoana fotsiny; Ary, ambonin'izany, ny iray dia mitovy amin'ny iray hafa amin'ny famokarana ny tsara fitondran-tena?